ဒီအကြောင်းတွေသိရင် သူ့ကိုပိုသဘောကျသွားမိမယ်ဆိုပဲ 😎 – Trend.com.mm
ဒီအကြောင်းတွေသိရင် သူ့ကိုပိုသဘောကျသွားမိမယ်ဆိုပဲ 😎
Posted on June 15, 2018 by Noel
“My Love from the Star” ဇာတ်ကားနဲ့ပရိသတ်တွေအသည်းနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်သွားသူ မင်းသားချောလေး Kim Soo Hyun နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့အချက်လေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေသိပြီးရင် သူ့ကိုပိုပြီးတောင်ချစ်သွားမှာဆိုပဲ။သူ့ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေ၊
ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေ၊ရယ်စရာလေးတွေစုစည်းထားတဲ့မီဒီယာကနေ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁)ငယ်ငယ်ကရုပ်နဲ့ အခုရုပ်လေးနဲ့က တူတူပါပဲ။(ဒါ သူဘယ်တုန်းကမှရုပ်မဆိုးခဲ့ဘူး၊ မပြုပြင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘော)
ကိုရီးယားမင်းသားတော်တော်များများကအရင်တုန်းကနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ရောက်လာချိန် အကြားမှာ ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kim Soo Hyun ကတော့ ငယ်ငယ်တည်း က သူ့ရုပ်လေးက ဒီတိုင်းပါပဲ။ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ၀၀ကစ်ကစ်လေးဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ဘော်ဒီအချိုးအစားလေးပြောင်း လဲလာတာ ၊ပိုပြီးချောလာတာ ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ 😍
၂)Kim Soo Hyun က ခံစားလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ
Kim Soo Hyun ဟာ သူ့ရဲ့ အသက် ၂၂နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတုန်းက ငိုခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၂နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ထဲက Han Seung Yeon က မွေးနေ့ဆုတောင်းသီချင်းလေးဆိုပေးခဲ့တာပါ။ Korean music program Sonyeon Sonyeo Gayo Baekseo အစီအစဉ်ရိုက်ကူးနေတုန်း အံ့သြ၀မ်းသာသွားပြီး ၀မ်းသာမျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ခံစားလွယ်တဲ့သူလေးပါ။
၃)ငယ်ငယ်တုန်းက underwear model တစ်ခါလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းအတွက်အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေဝတ်ကြပြီးကြော်ငြာပေးကြ တာပါ။ငယ်ငယ်တုန်းက အပျော်သဘောနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီတုန်းက လူတော်တော်များများကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငယ်ရွယ်သေးသလို ပရိသတ်အများစုကတော့သူ့ရဲ့ ကလေးဘ၀တုန်းကဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုမြင်ရလို့ သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက Kim Soo Hyun က သူ့ရဲ့ မီနီပေ့ခ်ျလေးမှာ သူ့ရဲ့အစ်မဆိုပြီး မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပုံကိုတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။တကယ်တော့ ဆံပင်တုစွပ်ပြီးရိုက်ထား တာပါ။သူက အဲ့ဒီဆံပင်တုကို ဒီတိုင်းပျော်စေချင်လို့ဝတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုံတင်တော့လည်းသူ့မျက်လုံးကိုလှအောင် ဖိုတိုရှော့လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ဘယ်လိုတောင် စတတ်နောက်တတ်တဲ့ကလေးလဲ 😂
၅)၂၀၁၀ တုန်းက နှလုံးကုသမှုလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်
Will it Snow at Christmas? ဇာတ်ကားအပြီးမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသမှုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ရင်ဘတ်ထိဖွင့်ပြီးမခွဲစိတ်ခဲ့ရပါဘူး။အခုတော့ကျန်းမာနေပါပြီ။
၆)သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးထဲကမိန်းကလေးပုံစံကတော့ ဗြိတိန်မင်းသမီး Kaya Scodelario ပါတဲ့
Kaya Scodelario ဟာ ယူကေမှာရော၊ကိုရီးယားမှာပါ အထူးနာမည်ကြီးပါတယ်။ တစ်ချို့ကိုရီးယားအမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေရဲ့ စိတ်ကူးထဲကမိန်းကလေးက Kaya Scodelario ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Kim Soo Hyun ကတော့ သူမနဲ့အပြင်မှာ တစ်ခါလူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
Jestina ရဲ့ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် အတူတူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Kaya က Kim Soo Hyun ဟာ ကြင်နာတတ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူတစ်ယောက်လို့တောင်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ရင် Kim Soo Hyun တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပျော်နေမလဲဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။Kaya ကအဲ့ဒီပုံကိုသူမရဲ့ SNS မှာတင်ခဲ့တာပါ။
၇) My Love From the Star ဇာတ်ကားဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ၀မ်းနည်းစရာဇာတ်သိမ်း ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါတဲ့။
ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။သူက My Love From Another Star ဇာတ်ကားရဲ့ အဆုံးသတ်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်သိမ်းစေချင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။သူက အဆုံးသတ်မှာ မျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်သိမ်းဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ ဇာတ်သိမ်းကတော့ ပျော်ရွှင်စရာ ဇာတ်သိမ်းခန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
၈) Kim Soo Hyun ဟာ ပရိသတ်တွေ၊တွဲဖက်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကျော်ပါတယ်
သနားစရာ Kim Soo Hyun လေး 😜ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးတွေမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ငြင်းပယ်ခံရတာပါ။ကြောင်လေးကတောင်သူခေါ်တာမလာပါဘူး။သူ့လက်ကို ကလေးလေးကိုကိုင်ပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံလေးမှာတော့ ဘယ်လိုတောင်ပျော်သွားလဲဆိုတာ မျက်နှာမှာတောင်ပေါ်နေပါတယ် 😂😂
၉)သူ့ရဲ့ အကျင့်တစ်ခုကတော့ ရယ်တဲ့အခါပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကွယ်လိုက်တာပါပဲ
မိန်းကလေးတွေတင်ဒီလိုအကျင့်မျိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ Kim Soo Hyun ဟာလည်း ရယ်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ကွယ်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။သူရယ်တာကို မြင်ရင် မတရားကြွေကျသွားမှာစိုးလို့ထင်ပါတယ် 😜
၁၀)My Love From Another Star ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့…
တကယ်တော့ Kim Soo Hyun က ဘယ်သန်ပါ။ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ဘယ်သန် အဖြစ်ကြိုးစားပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။
“My Love from the Star” ဇာတျကားနဲ့ပရိသတျတှအေသညျးနှလုံးကိုသိမျးပိုကျသှားသူ မငျးသားခြောလေး Kim Soo Hyun နဲ့ပတျသကျပွီးပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့အခကျြလေးတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ဒီအခကျြလေးတှသေိပွီးရငျ သူ့ကိုပိုပွီးတောငျခဈြသှားမှာဆိုပဲ။သူ့ရဲ့ အငျတာဗြူးတှေ၊
ငယျငယျတုနျးကအကွောငျးအရာတှေ၊ရယျစရာလေးတှစေုစညျးထားတဲ့မီဒီယာကနေ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
၁)ငယျငယျကရုပျနဲ့ အခုရုပျလေးနဲ့က တူတူပါပဲ။(ဒါ သူဘယျတုနျးကမှရုပျမဆိုးခဲ့ဘူး၊ မပွုပွငျခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘော)
ကိုရီးယားမငျးသားတျောတျောမြားမြားကအရငျတုနျးကနဲ့ရုပျရှငျလောကထဲဝငျရောကျလာခြိနျ အကွားမှာ ရုပျရညျပွောငျးလဲမှုတှရှေိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ Kim Soo Hyun ကတော့ ငယျငယျတညျး က သူ့ရုပျလေးက ဒီတိုငျးပါပဲ။ပုံထဲမှာကွညျ့လိုကျရငျ ငယျငယျတုနျးက ဝဝကဈကဈလေးဖွဈပွီး တဖွညျးဖွညျးအရှယျရောကျလာတော့ ဘျောဒီအခြိုးအစားလေးပွောငျး လဲလာတာ ၊ပိုပွီးခြောလာတာ ကိုမွငျတှရေ့မှာပါ 😍
၂)Kim Soo Hyun က ခံစားလှယျတဲ့သူတဈယောကျပါတဲ့
Kim Soo Hyun ဟာ သူ့ရဲ့ အသကျ ၂၂နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာတုနျးက ငိုခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၂နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာ မိနျးကလေးအဆိုတျောအဖှဲ့ထဲက Han Seung Yeon က မှေးနဆေု့တောငျးသီခငျြးလေးဆိုပေးခဲ့တာပါ။ Korean music program Sonyeon Sonyeo Gayo Baekseo အစီအစဉျရိုကျကူးနတေုနျး အံ့သွဝမျးသာသှားပွီး ဝမျးသာမကျြရညျကခြဲ့ဖူးပါတယျ။အဲ့ဒီလိုစိတျခံစားလှယျတဲ့သူလေးပါ။
၃)ငယျငယျတုနျးက underwear model တဈခါလုပျခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့
သူငယျခငျြးဖွဈသူရဲ့ အှနျလိုငျးရှော့ပငျးအတှကျအတှငျးခံဘောငျးဘီတှဝေတျကွပွီးကွျောငွာပေးကွ တာပါ။ငယျငယျတုနျးက အပြျောသဘောနဲ့လုပျခဲ့ကွတာဖွဈပမေဲ့ အဲ့ဒီတုနျးက လူတျောတျောမြားမြားကဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကငယျရှယျသေးသလို ပရိသတျအမြားစုကတော့သူ့ရဲ့ ကလေးဘဝတုနျးကဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ပုံစံတှကေိုမွငျရလို့ သဘောကနြှဈသကျခဲ့ကွပါတယျ။
တဈခါတုနျးက Kim Soo Hyun က သူ့ရဲ့ မီနီပခြေျ့လေးမှာ သူ့ရဲ့အဈမဆိုပွီး မိနျးကလေး တဈယောကျပုံကိုတငျခဲ့ဖူးပါတယျ။တကယျတော့ ဆံပငျတုစှပျပွီးရိုကျထား တာပါ။သူက အဲ့ဒီဆံပငျတုကို ဒီတိုငျးပြျောစခေငျြလို့ဝတျခဲ့တာဖွဈပွီး ပုံတငျတော့လညျးသူ့မကျြလုံးကိုလှအောငျ ဖိုတိုရှော့လုပျခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။ဘယျလိုတောငျ စတတျနောကျတတျတဲ့ကလေးလဲ 😂
၅)၂၀၁၀ တုနျးက နှလုံးကုသမှုလုပျခဲ့ရပါသေးတယျ
Will it Snow at Christmas? ဇာတျကားအပွီးမှာနှလုံးနဲ့ပတျသကျပွီးကုသမှုလုပျခဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးစှာနဲ့ ရငျဘတျထိဖှငျ့ပွီးမခှဲစိတျခဲ့ရပါဘူး။အခုတော့ကနျြးမာနပေါပွီ။
၆)သူ့ရဲ့ စိတျကူးထဲကမိနျးကလေးပုံစံကတော့ ဗွိတိနျမငျးသမီး Kaya Scodelario ပါတဲ့
Kaya Scodelario ဟာ ယူကမှောရော၊ကိုရီးယားမှာပါ အထူးနာမညျကွီးပါတယျ။ တဈခြို့ကိုရီးယားအမြိုးသားအနုပညာရှငျတှရေဲ့ စိတျကူးထဲကမိနျးကလေးက Kaya Scodelario ဖွဈခဲ့တာပါ။ဒါပမေဲ့ Kim Soo Hyun ကတော့ သူမနဲ့အပွငျမှာ တဈခါလူခငျြးတှဆေုံ့ခဲ့ဖူးပါတယျ။
Jestina ရဲ့ မျောဒယျလျအဖွဈ အတူတူလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး Kaya က Kim Soo Hyun ဟာ ကွငျနာတတျပွီးနူးညံ့သိမျမှတေဲ့သူတဈယောကျလို့တောငျပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ပုံထဲမှာကွညျ့လိုကျရငျ Kim Soo Hyun တဈယောကျ ဘယျလောကျပြျောနမေလဲဆိုတာ မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။Kaya ကအဲ့ဒီပုံကိုသူမရဲ့ SNS မှာတငျခဲ့တာပါ။
၇) My Love From the Star ဇာတျကားဇာတျသိမျးပိုငျးကို ဝမျးနညျးစရာဇာတျသိမျးဖွဈစခေငျြခဲ့တာပါတဲ့။ထူးထူးခွားခွားပါပဲ။သူက My Love From Another Star ဇာတျကားရဲ့ အဆုံးသတျကိုဝမျးနညျးဖှယျဇာတျသိမျးစခေငျြခဲ့ပါတယျတဲ့။သူက
အဆုံးသတျမှာ မကျြရညျတှကေနြတေဲ့ဝမျးနညျးဖှယျဇာတျသိမျးဖွဈစခေငျြခဲ့တာပါ။ဒါပမေဲ့ ဇာတျသိမျးကတော့ ပြျောရှငျစရာဇာတျသိမျးခနျးဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
၈) Kim Soo Hyun ဟာ ပရိသတျတှေ၊တှဲဖကျအနုပညာရှငျတှရေဲ့ ငွငျးပယျခွငျးခံရတဲ့နရောမှာ နာမညျကြျောပါတယျတဲ့
သနားစရာ Kim Soo Hyun လေး။ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးတှမှောမွငျတှရေ့တဲ့အတိုငျး ငွငျးပယျခံရတာပါ။ကွောငျလေးကတောငျသူချေါတာမလာပါဘူး။သူ့လကျကို ကလေးလေးကိုကိုငျပွီးနှုတျဆကျတဲ့ပုံလေးမှာတော့ ဘယျလိုတောငျပြျောသှားလဲဆိုတာ မကျြနှာမှာတောငျပျေါနပေါတယျ 😂😂
၉)သူ့ရဲ့ အကငျြ့တဈခုကတော့ ရယျတဲ့အခါပါးစပျကိုလကျနဲ့ကှယျလိုကျတာပါပဲ
မိနျးကလေးတှတေငျဒီလိုအကငျြ့မြိုးရှိတာမဟုတျပါဘူးနျော။ Kim Soo Hyun ဟာလညျး ရယျတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ပါးစပျကို လကျနဲ့ကှယျလရှေိ့ပါတယျတဲ့။သူရယျတာကို မွငျရငျ မတရားကွှကေသြှားမှာစိုးလို့ထငျပါတယျ 😜
၁၀)My Love From Another Star ဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ ထူးခွားတာတဈခုကတော့…
တကယျတော့ Kim Soo Hyun က ဘယျသနျပါ။ဒါပမေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲထဲမှာတော့ဘယျသနျ အဖွဈကွိုးစားပွီးသရုပျဆောငျထားတာမွငျတှရေ့ပါတယျ။
Tinder မှာ Big Bang အဖွဲ့ဝင် Seungri နဲ့ match ဖြစ်ရင် ဒင်နာအတူတူစားခွင့်ရမယ့် အစီ အစဉ်